महामञ्जुश्री र इबीए सेमिफाइनलमा, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
महामञ्जुश्री र इबीए सेमिफाइनलमा
काठमाडौं । महामञ्जुश्री र इबीए चौथो लालीगुराँस अन्तरविद्यालय बास्केटबल प्रतियोगिताको जुनियर ब्वाइजमा मंगलबार सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेका छन् ।
महामञ्जुश्रीले ओडिसीलाई ३९–२४ ले पराजित ग¥यो । महामञ्जुश्रीको जितमा सफल लामाले १७ अंक योगदान गरे । विजय गुरुङको १० अंक सहयोगमा इबीएले हिमरश्मीलाई ३२–२० ले हरायो ।
जुनियर ब्वाइजमै एन्जल्स हर्टले ग्रिनल्यान्डलाई २५–१८ तथा आयोजक लालीगुराँस नेसनल एकेडेमीले माउन्ट ग्लोरीलाई २७–१५ ले पाखा लगाए । एन्जल्स हर्टका ओसिस केसीले १२ तथा लालीगुराँसका दिपेश क्षेत्रीले १५ स्कोर गरे ।
सिनियर गल्र्समा एचएचसीए र इबीए तथा ग्रिनल्यान्ड र महामञ्जुश्री सेमिफाइनलमा भिड्ने छन् ।